कसरी खरिदकर्ता डेटा प्रयोग तपाईंको 2019 को बजार रणनीति लाभ उठाउन सक्छ | Martech Zone
कसरी खरिदकर्ता डेटा प्रयोग तपाईंको 2019 को रणनीति रणनीति लिन सक्छ
शुक्रबार, फेब्रुअरी 1, 2019 आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१3जिलियन वुड्स
यो अविश्वसनीय देखिन्छ कि, २०१ 2019 सम्ममा, थप कम्पनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छैनन् आशय डेटा तिनीहरूको बिक्री र मार्केटिंग पहल ड्राइव गर्न। यति थोरै मात्र जति राम्रो सम्भव लीडहरू उदा .्गो गर्न को लागी गहिरो उत्खनन तथ्यले तपाइँ र तपाइँको कम्पनी एक निर्णय लाभ मा राख्छ।
आज हामी यसका विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान दिन चाहन्छौं आशय डेटा र यसले भविष्यका बिक्री र मार्केटिंग रणनीतिहरूको लागि के गर्न सक्दछ। हामी निम्न सबैको अध्ययन गर्नेछौं:
आशय डेटा के हो र यो कसरी खटाइएको छ
कसरी आशय डेटा काम गर्दछ
पंक्तिबद्ध र मार्केटिंग र बिक्री बीचको सहकार्य
रणनीतिहरूको लाभ उठाउँदै
आशय डेटा के हो?
सर्तका सरल शब्दहरूमा, आशय डेटाले देखाउँदछ जब एक खास सम्भावितले अनलाइन व्यवहारहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ जुन किन्नको अभिप्राय देखाउँदछ। यसले दुई भिन्न प्रकारहरूमा अभिव्यक्त गर्दछ: आन्तरिक डेटा र बाह्य डेटा।
आन्तरिक आशय डेटाको दुई सामान्य उदाहरणहरू छन्
तपाईंको वेबसाइटको सम्पर्क फारम: सम्पर्क बनाउने व्यक्ति कम्पनी, यसको सेवाहरू, आदि को बारे मा अधिक जान्न चाहेको मनसाय संचार गर्दैछ।
स्थानीय ग्राहक डेटा: सीआरएम वा अन्य मार्केटिंग प्लेटफर्मको माध्यमबाट स्थानीय ग्राहकहरूको माध्यमबाट भेला गरिएको डाटा धेरै मूल्यवान छ जब आशय बुझ्ने प्रयास गर्दा। डाटा मार्केटिंग टोलीहरू द्वारा लिडहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन किन्ने निर्णयको नजीक बढिरहेका छन्।
बाह्य अभिप्राय डेटा तेस्रो-पार्टी प्रदायकहरू मार्फत भेला गरिन्छ र अधिक संकुचित हुने जानकारी संकलन गर्न ठूलो डाटा प्रयोग गर्दछ। यो साझा कुकीहरू मार्फत स collected्कलन गरिएको छ र आईपी स्तरमा क्युरेट गरिएको छ। यो डाटा हजारौं वेबसाइटहरूमा विशिष्ट पृष्ठहरूमा लाखौंको भ्रमणको उत्पादन हो।
यस प्रकारको डाटाले मेट्रिक्सको लगभग अन्तहीन संख्यामा विशिष्ट, संक्षिप्त जानकारी प्रदान गर्दछ। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
निर्दिष्ट कागजात, फाईल, वा डिजिटल सम्पत्ति डाउनलोड गरिएको पटकको संख्या
भिडियो हेरिएको संख्या
ल्यान्डि page पृष्ठमा कार्यको लागि एक कल पढेर कति मानिसहरूले क्लिक गरे
कीवर्ड खोज तथ्या .्क
ईन्टेन्ट डाटा कसरी सोर्स गरिन्छ?
आशय डेटा विक्रेताहरु द्वारा कम्पाइल गरिएको छ जसले B2B वेबसाइटहरु र सामग्री प्रकाशकहरुबाट डेटा संकलन गर्दछ, ती सबै एकको हिस्सा हुन् डाटा साझा को-अप। अवश्य, कुनै खास व्यक्तिले कुन साइटहरूको भ्रमण गर्छन भन्ने कुराको ज्ञान, उनीहरूले सर्त गरेको सर्तहरू, र उनीहरूले लगाएको ब्रान्डले यसको अनुहारमा अलि अलि पाप लाग्न सक्छ, तर यो केहि पनि हो। डाटा यस उद्देश्यको लागि एकत्रित र भण्डारित हुन्छ, त्यसपछि (वा बेचि) बिक्री र मार्केटिंग पेशेवरहरूसँग साझेदारी गरियो। उदाहरणका लागि एक प्रतिलिपि अधिकार कम्पनीले कम्पनीहरूमा विशेष चासो लिने छ (वा, केहि केसहरूमा व्यक्तिहरू) जसले खोज सर्तहरू प्रविष्ट गर्दछ "निबन्ध लेखन सेवाहरू"वा" एकेडेमी लेखक "प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूमा र जसले साइटहरू पनि भ्रमण गर्दछ जुन खरीद गर्नका लागि ट्र्याकेबल आशयको साथ यी प्रकारका सेवाहरू बिक्री गर्दछ।
डाटा कम्पाइल गरियो र मामिलाहरूको विशाल बहुमतमा साप्ताहिक रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ। शाब्दिक अरबौं खोजीहरू, साइट भ्रमणहरू, डाउनलोडहरू, क्लिक-थ्रु, रूपान्तरणहरू, र स of्लग्नताको एकत्रीकरणको माध्यमबाट विक्रेताहरूले सामग्री खपत प्रोफाईल र सर्जहरू पहिचान गर्न सक्दछन्।
यस भिडियो बाट बमबोरा यसले प्रक्रियालाई राम्रोसँग वर्णन गर्दछ:
ईन्टेन्ट डाटाले कसरी काम गर्दछ?
विश्वभरि लाखौं व्यक्तिहरूले लाखौं शीर्षकहरूमा खोजी गर्न इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् र जानबूझै विशिष्ट अनलाइन सामग्रीको साथ संलग्न गर्नुहोस्। तपाईले निर्णय लिनु होला कि कुन विवरणहरू सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छन् र निर्दिष्ट सments्लग्नता निगरानी गर्न शुरू गर्नुहोस् जुन निर्दिष्ट मापदण्डसँग मेल खान्छ। मार्केटरले सबै प्रासंगिक इंटेल प्रदान गर्दछ, तर सीमित छैन:
आदर्श संभावनाहरूको कार्य शीर्षक
कम्पनी आकार र स्थान
नाम र अवस्थित ग्राहक खाताहरूको URL हरू
लक्षित खाताहरूको नाम र यूआरएलहरू
नाम र सीधा प्रतिस्पर्धी को URL हरू
उद्योग प्रभावकर्ताहरू र घटनाहरूको लागि URL हरू
उद्योग प्रभावकर्ताहरू र विचार नेताहरूको सामाजिक ह्यान्डलहरू
सरल र जटिल खोजी सर्तहरू जुन उत्पादनहरू, सेवाहरू, समस्याहरू / दुखाइ पोइन्टहरू, र सम्भव / अपेक्षित परिणामहरूसँग सम्बन्धित छन्
माथिका सबै एल्गोरिदममा निर्माण गरिएको छ जुन सान्दर्भिक कार्यहरूको निरीक्षण गर्दछ र नोट बनाउँदछ (ती जसले लाखौं खोजीहरू र प्रत्येक दिन हुने स .्लग्नताको बीचमा अनौंठो सments्लग्नता जनाउँदछन्)। कम्पाईल गरिएको डाटाले पूरा सम्पर्क विवरणहरू सूचीबद्ध गर्दछ जसमा प्रथम र अन्तिम नामहरू, फोन नम्बरहरू, ईमेल ठेगानाहरू, कम्पनी नामहरू, सम्भावनाको शीर्षकहरू, स्थानहरू, उद्योग, र कम्पनी आकार समावेश गर्दछ। यसले प्रासंगिक डेटा पनि देखाउँदछ जुन उनीहरूले लिएका कार्यहरूको पहिचान गर्दछ।
अवलोकन गरिएको कार्यहरूका उदाहरणहरूमा सामान्य खोजीहरू, प्रतिस्पर्धी साइट संलग्नताहरू, उद्योग प्रभावकर्ता सगाई, र प्रमुख उद्योग घटनाहरूसँग सम्बन्धित सोधपूछहरू समावेश छन्। डाटाले प्रकारहरू र ट्रिगरहरूद्वारा कार्यहरू पनि विच्छेद गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यसले केवल संभावना वा ग्राहकले के गर्दैन भनेर देखाउँदछ, तर किन उसले यो गरे.
डाटालाई फ्ल्याग गर्न पनि सम्भव छ जुन हालको ग्राहकहरू, लक्षित खाताहरू, र प्रर्दशन गरिएको उद्देश्यको दोहोर्याउने घटनाहरूको पहिचान गर्दछ। यी सबै रकमहरू वास्तविक व्यक्तिहरूको सूची भएकोमा हुन्छ जुन तपाईंले पनि बेच्नुहुने उत्पादनहरू र सेवाहरूको प्रकारहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि वास्तविक कार्यवाही गर्दछ।
एक पंक्तिबद्ध र सहयोगी उपकरणको रूपमा आशय डेटा
मार्केटिंग र बिक्री सधैं प्रेम प्रेम घृणा को एक प्रकारको भएको छ। बिक्री टोलीहरू किन्न तयार छन् अधिक योग्य सीसा चाहिन्छ। मार्केटिंग टोलीहरू प्रारम्भिक सीसा भेट्टाउन, तिनीहरूलाई संलग्न गराउन, र पोषण गर्न चाहन्छन् जबसम्म तिनीहरू तत्परतामा पुगेनन्।
यी सबै चीजहरूले परिणामहरू बढाउँछन् र इन्टन्ट डाटाले दुबै बिक्री र मार्केटिंगको फाइदा गर्दछ। यसले साझा सहयोग उपकरण प्रदान गर्दछ जुन बिक्री र मार्केटिंगलाई सिधा जडान गर्दछ, सहयोगलाई बढावा दिन्छ, डाटालाई व्याख्या गर्दछ र सबै प्रकारका सम्पर्कहरूको लागि प्रभावकारी रणनीतिहरूको योजना बनाउँछ। यहाँ केहि सामान्य उदाहरणहरू छन् कसरी आशय डेटा सहकार्यमा प्रयोग गरिन्छ:
अधिक सक्रिय बिक्री नेतृत्व को खोज
मंथन घटाउने र ग्राहक वफादारी बढाउने
लक्ष्य खाताहरूको साथ सफल अन्तरक्रिया
ब्रान्ड मान्यता र मूल्य स्थापनाको लागि प्रारम्भिक सम्मिलन
प्रासंगिक चलन ट्र्याक गर्दै
माथिको प्रत्येक क्षेत्र मार्केटिंग र बिक्री दुबैको लागि रूचि हो। ती सबैमा सफलताले कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ र टोलीहरूका बीच उत्पादक, अर्थपूर्ण सहकार्यको लागि अनुमति दिन्छ।
आशय डेटा: प्रतिस्पर्धी लाभ
ईन्टेन्ट डेटाको उपयोगका धेरै फाइदाहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक यसको बिक्री र मार्केटिंग कर्मीहरु लाई सम्पूर्ण संस्था भर मा धेरै खरीददारहरु लाई लक्षित गर्न मद्दत गर्ने क्षमता हो। एक कम्पनीले गर्न सक्दछ, र प्राय: गर्छ, केवल एक लक्ष बजार वा एक छाना मुनि व्यक्तित्व भन्दा बढी। के एक कार्यकारी वा नेतालाई महत्वपुर्ण हुन्छ - र अक्सर हो - अर्कोबाट फरक।
आशय डेटा मार्केटर्सलाई खरीद प्रक्रियामा शामिल प्रत्येक व्यक्तिको लागि सामग्री अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ। सयौं संगठनहरूको साथ वेब खोजीहरूमा समान मापदण्डको प्रयोग गर्ने, अभिप्राय डेटाले उच्च लक्षित सामग्रीको सिर्जनालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ जसमा ठोस र सफल मार्केटिंग अभियानहरू निर्माण गर्न।
प्रभावकारी ईन्टेन्ट डेटा को लाभ
एक क्रेताको उद्देश्य र मूल सामग्री बीच अधिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी मार्केटर्स र बिक्री पेशेवरहरुलाई एक विशाल प्रतिस्पर्धी किनारा दिन्छ। संग्रह र आशय डेटा को गुणवत्ता अधिकतम गर्न आवश्यक छ कि भेला गरिएको डाटा विभिन्न डेमोग्राफिक, भौगोलिक, र फर्मोग्राफिक डाटा का सहसंबंध। ती सहसंबन्धहरू बिना, यो गाह्रो छ (पढ्न: असम्भवको नजिक) पूर्ण ग्राहक बुझ्नको लागि कुन विशेष व्यवहार विशेष ग्राहक प्रोफाइलहरूसँग मिल्दछ।
जब एक विशेष को अभिप्राय को एक समझ खरीदार व्यक्ति स्थापित गरिएको छ, दुबै बिक्री र मार्केटिंग राम्रो स्थितिमा छन् प्रासंगिक, उपयोगी सामग्री सिर्जना गर्न जुन प्रत्येक चरणमा नेतृत्व लिन्छ खरीददारको यात्रा.
ईन्टेन्ट डाटाको प्रभावी ढंगले लाभ उठाउनको एउटा सजिलो तरीका भनेको ब्लग सामग्री, वेब लेख, र अन्य प्रकारका लिखित सामग्री विकास गर्नु जुन तपाईंको लक्षित बजारको स्पष्ट समझ प्रदर्शन गर्दछ। सामग्रीले समस्याहरू र पीडा बिन्दुहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ जुन भेला गरिएको अभिप्राय डेटा मार्फत विशेष पत्ता लगाइएको थियो। तपाइँको ब्रान्डलाई यी सबै स्थितिहरू एक प्राधिकरणको रूपमा गर्नाले र बुद्धिमान, भरोसायोग्य, विश्वसनीय सामग्री पुर्‍याउने क्षमता सञ्चार गर्दछ।
मौलिक सामग्री वितरण गर्ने तरिकामा पहुँच गर्न यो पनि धेरै सल्लाह दिइन्छ। यसले सबै लक्षित सामग्रीको वरपर प्रकाशन र सिन्डिकेशन रणनीति विकास गर्न समावेश गर्दछ। संक्षेप मा, सम्भावित आशय दर्पण गर्ने सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यसले आफ्नो उद्देश्य गरिएको दर्शकहरूको अगाडि आफ्नो बाटो फेला पार्दछ।
एक लीड जेनरेशन प्लान जसले प्रभावी ढंगले इन्टन्ट डाटाको उपयोग गर्दछ र लाभ उठाउन सक्छ कुनै पनि बिक्री वा मार्केटिंग पहलमा एक निर्णय गरीन्छ। यसले तपाइँको ब्रान्डलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा पनि अलग सेट गर्दछ र अन्तत: एक उद्योग नेताको रूपमा मान्यता प्राप्त हुने समस्याहरू बढ्छ।
प्रत्यक्ष, सिमलेस सामग्री मार्केटिंग रणनीति निर्माण गर्नुहोस् जुन सम्भावितताहरूद्वारा सबै अनलाइन गतिविधि (खोजीहरू, साइट भ्रमणहरू, प्रतिस्पर्धीहरूसँगको कुराकानी, आदि) को बखत सम्भावित संकेतहरू दर्पण गर्दछ। यसले केवल अझ राम्रो लीडहरू उत्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन, यसले तपाईंको तल्लो रेखामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। इन्टेंट डाटा एकीकृत भविष्य मार्केटिंग अभियानहरूलाई अझ सफल बनाउन मद्दत गर्दछ, तपाईंको बिक्री टीम को खरीद गर्न को लागी सम्भावित खाताहरूमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिदै।
टैग: बजार भूमि
जिलियन वुड्स एक स्वतन्त्र पत्रकार र योगदानकर्ता लेखक हुन् जसले दुई बर्ष भन्दा बढी लेख्ने अनुभव राख्छन्। एक लेखक को रूप मा, उनले उत्पादन को लागी र केहि नयाँ सिक्न को लागी इच्छा छ प्रासंगिक सामग्री साझा गर्न मा उनको उद्देश्य देख्नुहुन्छ। उनको दिनको काम बाहेक, तपाईंले जिलियन स्वयंसेवा गर्न वा योगा गर्न लाग्नु भएको पाउनुहुन्छ।